Kunzima ukuthola ihhovisi noma indlu, lapho kwakuzoba ikhalenda. Kodwa inkinga eyinhloko itholakala lokuthi ukuthi idizayini enhle wale mikhiqizo kukalutshwana kakhulu. Siyaxolisa kakhulu ukuthi abantu abaningi kulezi 'abasizi "elula ezihlobene ngento ubudala futhi iSoviet. Ngakho-ke, lo sipho kuphela isihambile izixazululo design nowokunyathelisa amakhalenda. Siyakwamukela website yethu: http://geopress.ru/products/products_kalendari.html
Lapha uzothola amakhalenda bazo zonke izinhlobo, bobunjwa nemibala - futhi zonke stylish, kuhle futhi ezingokoqobo.
Yiziphi izinhlobo amakhalenda ayatholakala kule «Geopress»
Asikwazi zikhiqiza izinhlobo eziningana amakhalenda ezilungele nganoma iyiphi injongo:
Ngokuphelele zokuhamba njengoba isikhumbuzo. Ukucindezelwa kwakuvame ukusetshenziswa njengezaba okunikezelwayo phakathi amaphromoshini, izethulo, njll Ohlangothini front ngokuvamile beka ukukhangisa isithombe, isithombe noma ilogo ngemuva - langempela kugridi ikhalenda. Usayizi osezingeni - 7x10 cm ukunweba ukuphila ekhukhwini amakhalenda Kunconywa laminate ..
Ikakhulukazi ezifanelekile abasebenzi ehhovisi, ukonga isikhala kwi-desktop yakho. Sinenkosi izinhlobo eziningana:
indlu. Ungabeka isithombe ngakolunye uhlangothi, futhi ngakolunye - grid ikhalenda unyaka wonke. Kunokunye ongakwenza Balisebenzisa: 6 izinyanga komunye sidewall, futhi 6 - ngakolunye;
Pyramid. Igridi yekhalenda esisogwini ubuso mbhoshongo, futhi is kwahambisana by isithombe isikhangiso;
ukuhlela. Kuyinto uhlobo "endlini" namakhasi shintsho futhi unamathele iyunithi amarekhodi.
ifomethi Common - A4 futhi A5.
Ibekwe zonke evele mpo, ngokuvamile - ezindongeni. The version zakudala ye umklamo - division of the grid ikhalenda amayunithi 12 - Amakhasi 12. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukwengeza ikhava bese substrate, kanye lokufeza ukuphrinta amabili emaceleni. Okuvamise ngaphambilini osayizi: A4, A3, A2.
kukho elula elikuvumela ukuba kanyekanye ukubuka izinyanga eziningi. Kuyinto esisemqoka yokuhlelela isikhathi eside esizayo, futhi iningi nezinye izinhlobo asetshenziswa emahhovisi. Lapho esebekwe ukuba abe ezindaweni mpo. Ikhishwa kubalulwe ku A4, A3, A2.
Aqukethe ekhasini elilodwa futhi ngokuvamile uthenge ngokokuhlobisa izakhiwo. Ngokuvamile igridi ikhalenda unyaka wonke ezansi ishidi, futhi umfanekiso noma isithombe - phezulu. Ifomethi ethandwa kakhulu - A3, kodwa kungenziwa yayala A2 noma A4.
Amakhalenda Kutfutfukiswa design
Uma usuvele unayo i-layout, thina bayokujabulela ukusamukela. Kodwa uma kukhona kuphela izithombe noma izithombe okumele ubekwe Amakhasi, sizofaka kugridi zekhalenda bese babeka ngokuphelele isakhiwo.
Kwezinye izimo, sinikeza ukuthuthukiswa design ngabanye. Ukuqala ukusebenza kwi design, sifunda kusuka kuwe:
onjani ikhalenda oyikhethile;
lokho imibala ongathanda ukubona kusakhiwo.
Uma une izicelo ezibalulekile yokubhalisa, sizokwenza ngokuqinisekile sizibambele akhawunti.
Material ngoba ikhalenda incike zinhlobo:
Pocket - emaceleni paperboard kwabantu okungenani 300 g / m 2;
Wall amakhalenda, amaphosta - iphepha camera. I kwabantu ungakhetha ngokwakho - kusuka 150 kuya 250 g / m 2;
wekota - I-amabhlogo izinyembezi-off sisebenzisa camera iphepha 115 g / m ^ 2 noma offset 80 g / m. Ukuze olulodwa emaceleni paperboard substrate kwabantu ezifanele mayelana 300 g / m 2.
Ngaphezu kwalokho, sikwazi ukunikeza umklami noma iphepha metallized, nephepha ifaka plastic.
Imishini, okuzokwenza ukuba kunyatheliswe incike run ukuphrinta. ukuzungeza elikhulu kuzuzisa kakhulu ukuphrinta ku yokunyathelisa ye-offset, ikakhulukazi uma inani lamakhophi idlula 1000. Isibalo esincane - izingcezu 500.
Kodwa uma udinga esincane amakhalenda, esizinyathelisayo kubo kwikhompyutha digital, njengoba kulokhu, i-offset kuyoba ezingenanzuzo ngokuphelele.
Ngemva ekunyatheliseni lonke run, amakhalenda kumele kube okuphephile. Ukuze kukhiqizwe odongeni, izinhlobo emva kwezinyanga ezintathu kanti ezithile ideskithophu amakhalenda sisebenzisa Umshini wokuhlanganisa uhlanganisa amakhasi entwasahlobo Wire-O - plastic noma insimbi.
Ukuze ikhalenda edeskini, esingakunikela ukufakwa imishudo - metal wire izimisele phakathi.
amakhalenda Quarterly anamekwe kobuso ngokusebenzisa eyelets noma piccolo.
Ngemva kokugwingciza izihlahla entwasahlobo kwenziwa imiphetho, futhi ngemva - ukucutshungulwa post-zokunyathelisa.
Yini sinikeza imisebenzi yokuqedela
Ukuze wenze ikhalenda sihle futhi esiwusizo, sinikeza izinhlobo eziningana ukucutshungulwa postprinted:
ukuzisika - amakhalenda uzipha ukuma ethize usebenzisa lidayizi. Ezisetshenziswa kakhulu emakhoneni ukuqoqa;
Yokuvikela ngocwazi - lokunameka okuqinile ebusweni ifilimu nhlangothi zombili. Kungaba ecwebezelayo noma matte. Amakhalenda ivikela kusuka umswakama kanye umonakalo mechanical, ukungcoliswa;
ngokukhetha ngokusebenzisa ukuvenisha UV - inike izakhi ezithile: umbhalo, ilogo noma wabuka ukudweba, njll
foiling - isicelo noma isiliva ucwecwe phezu iphepha obala okushisa aphakeme.
Izici ezengeziwe esinalo cursors, ngemishayo iziphethu anemibala ehlukene.
Kungani ukubhuka amakhalenda ukuyiprinta «Geopress» - kuba inzuzo kuwe
Oda izincwadi esizinyathelisayo lokutimele ekukhiciteni amakhalenda, futhi thina ekuqinisekisa ukuthi ngeke uzisole. esiyikho:
Mahhala ukushintsha isakhiwo sakho, uma lungenayo nezimfuneko print noma nje ayikalungi;
Yenza i-oda lakho osukwini olungu-1. Uma udinga amakhalenda esiphuthumayo, uyiphrinte ngokushesha ngangokunokwenzeka ngokwenyama. Asazi ukuthatha yokukhokha double sokuba kwakhe nomuzwa wokuphuthuma, njengoba kwenziwa kwamanye izindlu zokunyathelisa. Wena uzokhokha imali efanayo somyalelo evamile;
Sinikeza 10% isaphulelo uma ilahlekelwe ukheshi yakho;
Thina uzitholele amakhalenda ukukhiqiza singakapheli isikhathi esibalulwe. Siyaqiniseka ngakho lokhu ukuthi sikulungele sikunikeze isaphulelo 20% uma isikhathi esimisiwe oda usulungile;
Qala abasebenza ikhalenda womkhiqizo ngemuva inkokhelo 50% kusengaphambili. Inani elisele ungakwazi ukukhokha lapho umkhiqizo usulungile, kodwa ngaphambi kokuba ithunyelwe.
Futhi khumbula ukuthi ikhalenda enhle stylish, akhiqizwa ukuphrinta «Geopress» - isiqinisekiso sokuthi ka uzokhumbula ukumbonga unyaka wonke.
Imikhiqizo ku "cishe lutho" ukuze "Aliekspress" - njengoba isikhathi ukuthenga?
Izinkanyezi eYekaterinburg. Indlela ukuhlela spare time sakho?
Lokubuyiswa kwemihlaba - kuyini? zokubuyiselwa umhlaba izinhlobo